Akajiakụ Femi Odetola Agaala Leta Christian Chukwu na Lọndọnụ – Ụwandịigbo
Akajiakụ Femi Odetola Agaala Leta Christian Chukwu na Lọndọnụ
Posted May 22, 2019 May 22, 2019 Omenka
Akajiakụ ji ego achụ ego, Omepụrụonyeọdịịrị, Maazị Femi Odetola, onye nke nyere puku dọla iri ise ($50,000) maka ọgwụgwọ ọrịa Maazị Christian Chukwu, agaala Lọndọnụ ije leta ya bụ onye ọrịa. Maazị Odetola mere mjem nleta a na ntụmadị iji hụ etu Maazị si agbake.
Mgbe o ruru nʻụlọọgwụ ebe Maazị Chukwu nọ na Lọndọnụ, o jiri ohere ahụ were kwuoro ndị dịbịa Bekee dị iche iche bụ ndị na-agwọ Maazị Chukwu. Ọ gwara ndị dibịa Bekee ahụ na Maazị Chukwu bụ odogwu Naịjirịa ji eme ọnụ. Nʻihi ya, ọ rịọrọ ha ka ha hụ na a na-elekọta ya anya etu o kwesiri nʻeleghị ego anya nʻihu.
Mgbe ya na ndị dibịa Bekee ahụ kparịtachara ụka, Maazị Odetola sịrị na obi bụ ya naanị an̄ụrị na ndị na-arụ nʻụlọgwụ ahụ na-elekọta Maazị Chukwu etu kwesiri.
Maazị Christian Chukwu, onye bụbu onyeisi egwuregwu bọọlụ Naịjirịa tupu ọ laa ezumike nka, sịrị na ya amaghị etu ya ga-esi kelewe Maazị Odetola maka ihe o meere ya. O wee rịọ Chineke ka ọ kwụghachi ya ụgwọ ọrụ ya. O kelekwere igwurube ndị Naịjirịa na-ekpere ya ekpere ka ya gbakee ngwangwa.
⟵Ndị APGA Ebole Gọvanọ Obianọ Ebubo
Etu Jayjay Okocha Siri Were Ndịọcha Gwurie Egwu na Bọọlụ⟶